बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार ऐनसँगै सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार ऐनसँगै सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ
बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार ऐनसँगै सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ
सुनिल कुमार पोखरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता
फागुन ९ गते, २०७६ - १७:३३
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीले घुस मागेको अडियो रेकर्ड बिहिबार मिडियामा सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरु र आम जनताले राजिनामा दिएर मात्रै मन्त्री बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै तत्काल उनीमाथि छानविन प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारमाथि दबाब दिएका छन् ।
कतिपयले मन्त्री बाँस्कोटामाथि अख्तियारले मात्र छानबिन गरेर नहुनै भन्दै उनीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । यस विषयमा बाँस्कोटामाथि कानूनी कारबाही, पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयको नाममा मौलाउँदै गएको भ्रष्टारबारे नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलसँग खबर डबलीले कुराकानी गरेको छ । पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस लिएको आरोपमा राजिनामा दिएका छन् । राजिनामा दिएको भरमा के उनले उन्मुक्ती पाउन सक्छन् ?
राजिनामा दिएर भ्रष्टाचार अभियोगबाट बच्न सकिँदैन । मन्त्रीमाथि घुस लिएको आरोप लागिसकेपछि नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नु उहाँको कुरा हो । उहाँले कानूनी प्रकृयाबाट मुक्ती पाउनु हुन्न । अख्तियारको पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको विषयमा पनि बाँस्कोटाको जस्तै भिडियो लिक भएको थियो । पछि उनीमाथि मुद्दा चलेको थियो । त्यहि प्रकरणको केस भएकोले बाँस्कोटामाथि अख्तियारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । राजिनामा कुनै कानूनी उपचार होइन ।
मन्त्री जस्तो व्यक्ति एउटा एजेन्टसँग प्रत्यक्ष बाग्रेनिङका उत्रिनुलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
यो कानूनी राजको उपहास हो । लोकतन्त्रको लागि दूर्भाग्य हो । अहिले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यस प्रकृयामा मन्त्री, सचिव सबै सहभागी रहेका छन् । बाँस्कोटा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै छन् । बाहिर नआएका मात्र हुन् ।
उहाँले राजिनामा दिएमात्र पुग्छ कि अख्तियारले छानविन प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ ?
उहाँले राजिनामा दिएर मात्र सुख पाउनु हुँदैन । तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु कि, सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नेपाल बैंकमा भएको थियो । र त्यसमा शेरबहादुर थापा संलग्न मानिन्छन् । त्यसपछि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको भ्रष्टाचार थियो । उनले गरेको भ्रष्टाचार एउटा साप्ताहिक पत्रिका छापिएको भरमा इभेस्टिगेसन गरेर सबैलाई मुद्दा चलाएको थियो । सायद यो ०५७ तिरको कुरा हुनुपर्छ ।
अहिलेको प्रकरणमा मन्त्रीको राजिनामै आइसकेपछि अख्तियारलाई छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३ बमोजिम बयानको लागि तुरुन्तै बोलाउन सक्छ ।
सार्वजनिक ओहादामा बस्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा अख्तियार, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र जस्ता निकाय छन् । तर पनि नेताको आचरणमा कुनै सुधार आएको छैन । गत हप्ता अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरु छुटाए भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
भ्रष्टाचार भन्ने कुरा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक भन्ने हुँदैन । घुस माग्नु पनि भ्रष्टाचार हो । यहाँ कस्तो छ भने घुस लिएको छैन नि भन्ने कुरा आएको छ । माग्नु नै बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ । अख्तियारले उहाँलाई मुद्दा चलाउँदैन भने हिजो राजनारायण पाठकलाई किन चलाईयो ? अख्तियारको विश्वसनियताको लागि पनि उसले बयान लिने, अनुन्धान गर्ने र भिडियोको आधिकारकिता पुष्टी हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा मुद्दा नचल्ने स्थितिमा पुग्यो भने एउटा कुरा हो । अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ग्रैह्र कानूनी हुन्छ ।
बाँस्कोटाको हकमा दुईवटा मुद्दा लाग्छ । उहाँले झण्डै दुई बर्ष सरकारमा बस्नु भएको छ । उहाँले यस अवधिमा गैह्रकानूनी तबरबाट अकुत सम्पत्ति जोड्नु भएको छ भने सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ । उहाँलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारले सँग–सँगै मुद्दा प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरु अख्तियारको कारवाहीबाट छुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँस्कोटामाथि कारवाही होला त ?
उहाँले मुद्दा जित्छ कि हार्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो । मुद्दा चलाएर पनि उहाँले प्रमाणले जित्न सक्नु हुन्छ । प्रश्न कहाँ हो भने अख्तियार संवैधानिक निकाय हो । यसमा सरकारको प्रभाव पर्दैन । आफ्नो विश्वासनियताको लागि पनि अख्तियारले मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
स्वीस कम्पनीका नेपालका एजेन्ट विजय मिश्रले मुखै खोलेर यो अडियो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पहिल्यै पेश गरेको हो र कारवाही भएन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ रह्यो नि ?
जुन प्रेस खरिदमा उहाँले डिल गर्नुभएको छ । त्यो सञ्चार मन्त्रालयले मात्र निर्णय लिन सक्ने विषय होइन । त्यो मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसकारण ७० करोड बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट नभईकन बाँस्कोटाले भन्ने हिम्मत गरेका छैनन् । अडियो मिश्रजीले पुर्याए पुर्याएनभन्दा पनि बलियो प्रमाण प्रधानमन्त्रीको संकेत वा मन्त्रिपरिषद्को कन्फिडेन्ट नलिइकन बाँस्कोटाले डिलै गर्न सक्नुहुन्न । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो भन्ने कुराकोे पुष्टि गर्छ ।
तपाईँले भनेअनुसार यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउन खोजिएको जस्तो देखियो, यदि त्यस्तै हो भने यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई कारवाही हुन्छ त ?
नीतिगत निर्णय भनेर कहाँ आयो भने लाउडाको विषयमा गिरिजाबाबुलाई अख्तियारले पत्र काटेपछि उहाँ सर्वोच्वमा रिट दायर गर्न जानुभयो । सर्वोच्चले अहिलेको ऐन बमोजिम पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था छ भने पछि उहाँले नै सल्लाहपछि अख्तियारको ऐन नै संशोधन गरियो । त्यसमा मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने बुँदा त्यो ऐनमा थपियो ।
नीतिगत निर्णय भनेको कुनै विषयमा मन्त्रिपरिषदले कानून वा ऐनमा नभएको कुरा नीति बनायो भने हुन्छ । अब घुस खानको लागि नीति बनायो भने त्यो कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ ? कानूनको दुरुपयोग र सदुपयोग भनेकै यहि हो । जस्तै मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्यो भने सेक्युरिटी प्रेस किन्ने भनेर निर्णय गर्यो । यो नीतिगत निर्णय हो । कोसँग किन्ने ? कसरी किन्ने भन्ने कुरा त्यो नीतिभित्र पर्दैन । मन्त्रिपरिषदले कुनै विषयमा नीति बनाउन सक्छ । प्रोसेसभित्र लगेर यति करोडमा किन्ने भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसमा गडबढ भएको छ भने मन्त्रिपरिषद पनि छानविनको दायरामा आउँछ र प्रधामन्त्रीलाई पनि कारवाही हुन्छ ।
तत्कालिन लाउडा काण्डमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले जहाज अष्ट्रियाको एउटा कम्पनीसँग किन्न निर्णय गरेर वायुसेवा निगमलाई जिम्मा दियो । अष्ट्रियाको लाउडा भन्ने कम्पनीसँग कत्तिमा किन्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ तारणीदत्त चटौतको जिम्मामा थियो । त्यसैले चटौत जीलाई मुद्दा चल्यो ।
अहिले पनि मन्त्री परिषद्मा पैसा दामसहितको निर्णयबाट भयो भने सबै पर्छन् । जस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा किन बाबुराम र माधब नेपाल पर्छन् भने उनीहरुले मोहीलाई जग्गा दिने, साटफेर गर्ने, व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्यो । त्यो निर्णय नीतिगत निर्णय होइन ।
फागुन ९ गते, २०७६ - १७:३३ मा प्रकाशित
घर फर्किए रोकिएका दुई हजार तीन सय ७० विदेशी नागरिक